Home News Beesha Surre oo Dalbatay in Kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug lasiiyo,Hadii kale...
Beesha Surre oo Dalbatay in Kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug lasiiyo,Hadii kale ay Maamulkaasi ka Baxayaan(Aqriso Bayaan)
Iyadoo dhawaan la filaayo in la qabto Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Mamaulka Galmudug doorasho lagu balamay in ay ka dhacdo Dhuusa=mareeb ayaa waxaa durba soo baxaayo isqab qabsi la xariira Cid yeelaneeysa Kursigaani.
War qoraal ah oo kasoo baxay beesha Surre ayaa lagu sheegay In kursigaasi saami ahaan ay beeshu leedahay markii horana cadaalad daro looga weeciyay sidaas awgeedna hada loo baahan yahay in iyaga la siiyo.
Warqada ayaa lagu wargeliyay Dhamaan masuuliyiinta Maamulka Galmudug kuwaasi oo laga codsaday in ay ilaaliyaan jiritaanka Mamaulkaasi islamarkaana ay cadeeyaan Beesha saami ahaan yeelaneeyso kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka.
23-Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Mamaulka Galmudug oo u dhashay beeshaasi ayaa warqada ku saxiixan waxaana ay isku raaceen in ay helaan kursigaasi oo ay saami ahaan u leeyihiin
Khilaafka xoogan ee ka dhex Aloolsan Maamulka Galmudug ayaa sii xoogeeysanaayo waxaana Cali gacal casir oo qaar ka mid ah Xildhibaanadu sheegeen in ay xilka ka qaadeen uu aaminsan yahay in uu wali Yahay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaasi.
Dhanka kale Beello dhowr ah ayaa u hanqal taagaya qabashada Xilkaasi Sida Beesha waceeysle oo Dhowr Musharax Durba la timid,waxaana cadeeyn qaabka madaxweyne Xaaf arinkaani u wajahi doono
Previous articleAskari Toogasho Ku Dilay Labo Ruux oo Dhac-geeysaneeysay!!
Next articleDagaalamayaal ka Tirsan Al-shabaab oo lagu dilay qeeybo ka mid ah Gobolka Jubada Hoose
Farah Macalin oo noqday lataliyaha gaarka ah ee MW Waare iyo...